Emphilweni umsebenzisi ngamunye kufika isikhathi lapho ikhompyutha yakho iqala ukubambezela futhi uhlanganyele. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, kungaba iphenduke ukwehluleka uhlelo. Kodwa ningatatazeli, njengoba onjiniyela OS kulibona ukujika kungenzeka imicimbi bemnika ithuba ukubuyela emuva. Kuyini buyisela emuva futhi indlela okungakusiza ngayo?
Buyisela emuva ikuvumela ukubuyela isistimu yakho yokusebenza a adalwe ukubuyisela phuzu. Singasho ukuthi kusho ukuthini ukuthi "inkokhelo yesenzo esithize" - uhlelo ukubuyisela. Isimiso ezisebenza ngakho kufana ukudalwa nokongiwa kule game, okuyinto ungabuyela uma kukhona okungahambanga kahle. Kuyaqondakala ukuthi kubuyelwe iphuzu olulondoloziwe, ngakho bonke abashayeli esanda kumiswa nezinhlelo kuzosuswa. Kodwa lokhu akulona njalo izindaba ezimbi, njengoba yimbangela ejwayelekile kakhulu kukhompyutha amabhuleki eqinisweni hlelo.
Kodwa uma kukhona amafayela ukululama, kufanele agcinwe endaweni ethile. Futhi zingagcinwa entweni omunye amadiski, okuyinto ngabo kugcinelwe endaweni. Uma buyisela emuva kukhutshaziwe, kubalulekile ukuba ixhume. I-algorithm ezilandelayo: ukuvula izindawo kukhompyutha yakho , qhafaza kwesokudla "Properties" - "Protection System", bese ukhetha idrayivu kusukela ahlinzekwa bese uchofoza "Dala." Kuyinto ebalulekile kakhulu, ngakho-ke kudingeka wazi ukuthi iyini buyisela emuva futhi kanjani ukuyisebenzisa.
Ngaphambi kokufaka ukubuyiselwa, kufanele uqonde izizathu izinkinga izinhlelo, kusukela, ngaphandle kwakhe, zingase zibe khona ezinye izindlela zokuxazulula izinkinga. Buyela reference iphuzu okufanele Ingasetshenziswa uma ezinye izindlela zokulungisa inkinga akusebenzi. I ezivame kakhulu izinkinga zimi kanje:
Izinhlelo nama-virus. Inthanethi agcwele ezihlukahlukene izinhlelo, futhi akubona bonke ziphephile. Nokufaka ezinonya noma onegciwane igciwane Umbuso, kungabangela ukulimala eside kukhompyutha yakho.
Ucingo lwemibhalo lakwaMicrosoft. Uhlelo lokusebenza le-Windows njalo okulandwayo ukufakwa izibuyekezo, okuyinto ngemuva kwesikhathi esithile kuphazamisekile amadala futhi awukwazi ukusebenza ngokujwayelekile, okwehlisa at PC efanayo. Kulokhu, umsebenzisi kunzima ukuqonda ukuthi yini inkinga. Kodwa uma umsebenzisi uyazi ukuthi lokhu pullback, kuzakubuyela uhlelo isimo kwaba ngaphambi ukulanda updates.
Khiya Antivirus. isofthiwe Antivirus angamuvimba bese ususa amafayela ebalulekile emsebenzini, uwabheka elimazayo.
kokungenela komsebenzisi. Ngezinye izikhathi, okungukuthi abasebenzisi curious kakhulu ngephutha susa izakhi ezidingekayo ukusebenzisa izinhlelo noma yesistimu yokusebenza, futhi umphumela waba ukuthi kungaba khona izinkinga.
uhlelo lwekhompyutha buyisela emuva
Buyisela uhlelo lokusebenza ngezindlela eziningana.
"Qala" 1. Ngokusebenzisa imenyu. Vula "Qala" - "Zonke Izinhlelo" - "Izesekeli" - "Amathuluzi esistimu" - ". System Buyisela" Kukhona iwindi, okuyinto libala ulwazi mayelana nosuku insiza yokubuyiselwa esimweni iphuzu. Uma ukhetha iphuzu yokutakula livela "Ukucinga nezinhlelo ethintekile" inkinobho. Ngokuchofoza ke, ungabona ukuthi zizosuswa ngemva kokubuyiselwa. Bese uchofoza "Okulandelayo" futhi uqedile.
2. kumodi ephephile. Ngaphambi ukulayisha "windose" kufanele ucindezele F8, bese ukhetha "Imodi Safe". Okulandelayo, ukubuyela emuva ohlelweni computer kufanele kube ngokusebenzisa "Qala". Le ndlela muhle kulelo cala, uma unezinkinga OSes, futhi akusho ukulayisha, noma kuveza blue "isihenqo ukufa."
3. Ngo-kudiski ebhuthini. Buyisela uhlelo kungaba ebhuthini disk -Windows. Faka disc ku idrayivu, cindezela F12 bese ukhetha ohlwini eyinhloko ukusebenzisa drive disk uma Akubalulekile okuzenzakalelayo. Isifaki window ivuleka, lapho kukhona 2 izinkinobho: ". System Buyisela" "Faka" futhi Chofoza ukuphela zakamuva futhi phambili kwenqubo.
Wonke umsebenzisi ikhompyutha kufanele uqaphele ukuthi buyisela emuva ezinjalo. Ngeke ngaphandle kwezinkinga ukulungisa uhlelo ezilimele bese ubuyela yesistimu yokusebenza esimweni ukusebenza.
Lungiselela ukufinyelela amafayela namafolda. Indlela yokwenza defragmentation.
Yokutakula Sizuzise wesistimu ifayela-Windows
Umdlali wasesiswini Bulgarian Blagoy Georgiev
Dmitry Mamin-Sibiryak: imisebenzi kanye biography. Yini ebhala Mamin-eSiberia?
Lokungeniswa futhi ebanjwayo: aspect zomlando
Izindlela yekucasha: Yini esizayo behlomula?
Kanjani ukuze usize umntanakho ukuba ulungise enkulisa ngokushesha
Uhlaka ukuzwa: nokwakheka umsebenzi weminyango ezinkulu